Hooyadda Dhashay Cumar Shariif Jeeg oo sheegtay in wiilkeeda la shirqoolay | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Hooyadda Dhashay Cumar Shariif Jeeg oo sheegtay in wiilkeeda la shirqoolay
Hooyadda Dhashay Cumar Shariif Jeeg oo sheegtay in wiilkeeda la shirqoolay
Hooyada dhashay guddoomiyaha degmada Xamarweyne oo dhawaan shaqo joojin lagu sameeyay, ayaa markii ugu horeysay ka hashay xeritaanka wiilkeeda iyo shaqo joojinta lagu sameeyay.
Iyada oo ka hadlaysay fariin cod ah oo laga duubay ayay ku eedeysay xisaabaha guud ee dowladda Hoose, inuu ka dambeeyo xariga loo geysay wiilkeeda oo horaantii bishaan September shaqo joojin lagu sameeyay.
Waxay codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyada oo ka codsatay inuu sii daayo wiilkeeda oo shirqool lagu xiray, sida ay sheegtay.
“Waxa weeye Cumar Shariif Mishinaa loo dhigay, mishinkaasina waxaa u dhigay ninka xisaabiyaha ka ah dowladda Hoose, waxaan codsanayaa in wiilkeyga lasii daayo, Farmaajo balaayo kaa daba adeeganaysa allaha hakaa qabto”ayay tiri hooyadasha dhashay Guddoomiyaha Xamarweyne Cumar Shariif Jeeg.
Sidoo kale waxa ay tilmaamtay in wiilkeeda Cumar Shariif Jeeg inuu yahay mid aan runta ka gaban, sidoo kalena uu diiday inuu saxiixo warqado uu usoo diray Xisaabiyaha guud ee dowladda.
5-ta bishaan September ayaa shaqo joojin iyo xiris lagu sameeyay guddoomiyaha degmada Xamar weyne Cumar Shariif Jeeg ka dib warqad ka soo baxday xafiiska Xuseen Maxamed Nuur oo xilligaas ahaa kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir.
Previous articleKenya “Lacagaha ka yimaada ganacsiga Sharci darada Al Shabaab ayaa lagu maalgeliyaa”
Next articleTirada dadka lagu diley dagaalo ka dhacay gobolka Sool oo sii korortay